?Dad Somali ah ayaa ku dhintay dagaalka maanta, qaarna waa la la?yahay? Qunsulka safaaradda Somalida ee Cadan. – Radio Daljir
Maajo 31, 2011 12:00 b 0
Cadan, May 31 – Hal qof oo Soomaali ah ayaa dhintay qaar badanna waa la la?yahay ka dib markii uu dagaal xooggan ku dhexmaray ciidamada dawladda Yamen iyo ciidamo beeleed taageersan wadaadka la yiraahdo Sheekh Al-axmar kana tirsan qabiilka uu ka soo jeedo madaxweyne Saalax.
Qofka Somaliga ah ee dhintay waa wiil yar oo rasaasi haleeshay isagoo qoskooda u soo adeegaya, waxaana ilaa iyo hadda aan la hayn dad badan oo Somali ah oo ku sugnaa goobaha ay dagaaladu ka dhacayaan sida uu caawa Daljir u sheegey qunsulka safaaradda Somalida ee Cadan Xuseen Xaaji Axmed.
Qunsulka ayaa sheegay in ilaa 150 qoys oo Soomaali ah ay ka barakeceen goobaha dagaalka, waxaana uu qunsulku ku boorriyey dadka Somalida ah inay dalkoodii ku noqdaan.
Xaaladda Yamen ayaa ka sii daraysa ka dib markii lagu fashilmay dhawr isku day oo lagu doonayey in xal lagu gaaro, waxaana ugu dambeeyey xabad joojintii afarta beri ahayd ee xalay bur-burtay. Shalayna koox Islaami ah ayaa qabsatay gobolka Ebyan ee Koofurta dalkaasi gaar ahaan magaalada xarunta ah ee Zinjibaar.